अन्तर्वार्ता र लुकाउने क्षमता कसरी विकास गर्ने?
केहि मानसिक मान्छे जन्म देखि दिइएको छ, अरु धेरै चाँडै वा पछि लाग्न को लागी इन्टरनेसन, फोर्बिंगिङ, क्लोयरभान्सान्स र अन्य लुकेका क्षमताहरू कसरी विकसित गर्ने भनेर जान्न सक्दछ। यी प्रतिभाले जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न सक्षम छन्, तर तिनीहरूको काममा लामो र कडा परिश्रम हुनेछ।
प्रभावकारी घटना व्यवस्थापनको लागि अन्तर्वार्ता कसरी विकसित गर्ने?
अन्तर्वार्ता एक प्रकारको प्रवृत्ति हो , एक अवचेतन स्तरमा भविष्यका घटनाहरूको पशु सनसनी। यस तथ्यको लागि वैज्ञानिक व्याख्या एक कुरा हो: अवचेतन मन धेरै चित्रहरु को चेतना र काम भन्दा बढी अज्ञात को संरक्षण गर्दछ। अन्तर्वार्ता र लुकेको क्षमताको विकासले यस्तो तरिकालाई मनन गर्न मदत गर्नेछ।
ध्यान आफ्नो अवचेतन सुनेको तरिका हो। यो कला धेरै संस्कृत र धर्महरु द्वारा आदर्श मा आधारित छ, तर एक साधारण व्यक्ति को लागि यो आफ्नो सोच बंद गर्न सिकन को लागि पर्याप्त छ। यो गर्न, एक ठाँउमा एक आरामदायक स्थिति लिनुहोस् जहाँ कुनै र केहि पनि विचलित छैन, रोशनी वा मोती लिनुहोस् र अनगिनत गिनती, औंलाहरू बीचको पास गर्नुहोस्। केहि पनि ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छैन। देखाइएको छविहरू सम्झन सकिन्छ, तर विश्लेषण गर्न सकिँदैन।
अवचेतन दिमागबाट जानकारी निकाल्न अर्को तरिका मस्तिष्क झाड्य जस्तै हो। पहिला तपाईंलाई पेन र पेपरको टुक्रा लिनु पर्छ, शान्त स्थानमा रिटायर र शब्द र वाक्यांशहरूको सबै स्क्रैपहरू लेख्न थाले जुन तपाईंको टाउकोमा पप अप गर्दछ। यस चरणमा कुनै पनि विश्लेषण र आलोचना गर्नु हुँदैन, तपाईले पछि के लेख्नु भएको कुरा सोच्नु पर्छ, छविहरूको प्रवाह बाहिर जान्छ। यो विधिले असम्भव चिन्तित स्रोतहरूको पहिचान गर्न मद्दत पुर्याउँछ, जुन धेरै विश्वास गर्दछ, कारण बिना हुन्छ।
मस्तिष्कको दाहिने गोलार्धको विकासको साथ समानांतरमा अन्तर्वार्ता र क्लोयरभान्सन बलियो बनाउनुहोस् जुन अवचेतनाको कामको लागि जिम्मेवार छ। सबैभन्दा राम्रो तरिका बायाँ हातको राम्रो मोटर कुशलतालाई सुधार गर्न को लागी, जुन तपाईंलाई हरेक दिन पहेलो थप्न आवश्यक छ, साना वस्तुहरू क्रमबद्ध गर्नुहोस्।
अन्तर्वार्ता र अन्य लुकेको क्षमताको विकासको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवस्था एक संवेदन, चिन्ता, फरवार्डिङको लागि ध्यान छ। एक भित्ता आवाजले सधैँ एक व्यक्तिलाई चेतावनी दिन्छ, तर यी सँधै सल्लाहहरू सुनेका छैनन्।
पुनरुत्थान - के यो आत्मा को पुनरुत्थान मा विश्वास योग्य छ?
Peony tattoos - meaning
त्यहाँ पिशाच वास्तवमा छन्?
ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ?
Onyx पत्थर - जादुई गुणहरू
स्लाइस पौराणिक कथा मा देवी लाडा - प्रेम र सुन्दरताको देवीलाई कसरी प्रार्थना गर्ने?
ब्ल्याक एजेट स्टोन - जादुई गुण
के जीवन बिताएको छ?
प्रेमको दौडमा गुजारा
इंदिगो बच्चाहरु - जो तिनीहरू हुन्, आधुनिक र प्रसिद्ध नियोगो बच्चाहरु
अगमवक्ता सपनाहरू - सत्य वा कल्पना?
मानसिक डैशी - स्वामी दशा को प्रथा र भविष्य को बारे मा उनको भविष्यवाणी
लेब्राडोर - नस्ल का वर्णन
ह्यान्ड्स भण्डारणको लागि सुरक्षित
नाइट्रोमोफोस्को - आवेदन
कति रोटीविलहरू बस्छन्?
8 शापित स्थानहरू, जहाँ राम्रोसँग हस्तक्षेप नगर्नुहोस्!
घरमा बिस्कुट बेरोजगारको लागि सिरप
जीवन कसरी सुरु गर्ने?
गर्भावस्थाको समयमा आयोडोमोरेन
जॉन लेनन र योको ओनो
लेब्रिडोरको पुनरुत्थानलाई कसरी खाने?
यूरिया रगत मा - आदर्श
विधि शेभेनको - वोदका तेलको साथ
Mons, बेल्जियम - आकर्षण